2 Ihe E Mere 30 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ihe E Mere n’Ụbọchị Ndị Eze nke Abụọ 30:1-27
Hezekaya mere Ememme Ngabiga (1-27)
30 Hezekaya ziri ndị Izrel na ndị Juda niile ozi,+ degakwara ndị Ifrem na ndị Manase+ akwụkwọ ozi, ka ha bịa n’ụlọ Jehova dị na Jeruselem meere Jehova Chineke Izrel Ememme Ngabiga.+ 2 Ma, eze Hezekaya na ndị o mere ndị isi nakwa ndị niile nọ na Jeruselem kpebiri ime Ememme Ngabiga ahụ n’ọnwa nke abụọ,+ 3 n’ihi na ha emelighị ya n’oge a na-eji eme ya,+ maka na ọtụtụ ndị nchụàjà edoghị onwe ha nsọ,+ ndị mmadụ ezukọtaghịkwa na Jeruselem. 4 Ihe a dịkwa mma n’anya eze nakwa n’anya ndị niile nọ ebe ahụ. 5 Ha wee kpebie ka a gaa gwa ndị Izrel niile, malite na Bia-shiba ruo Dan,+ ka ha bịa meere Jehova bụ́ Chineke Izrel Ememme Ngabiga na Jeruselem, n’ihi na ha emekọtabeghị ya ọnụ otú e dere n’akwụkwọ ka ha na-eme.+ 6 Eze wee gwa ndị na-ejere ya ozi,* ha ewere akwụkwọ ozi ya na ndị o mere ndị isi dere gazuo Izrel na Juda niile. Ihe e dere na ya bụ: “Ndị Izrel, lọghachikwutenụ Jehova bụ́ Chineke Ebreham, Aịzik, na Izrel, ka o wee nọnyere ndị fọdụrụ ná ndị ndị eze Asiria na-akparaghị aka.+ 7 Unu adịla ka nna nna unu hà na ụmụnne unu, ndị nupụụrụ Jehova bụ́ Chineke nna nna unu hà isi, nke mere o ji mee ha ihe dị egwu, otú unu na-ahụ taa.+ 8 Ugbu a, unu agbala isi akwara otú nna nna unu hà mere.+ Ruberenụ Jehova isi, bịanụ n’ụlọ nsọ ya+ nke o doro nsọ ruo mgbe ebighị ebi fee Jehova bụ́ Chineke unu, ka ọ kwụsị iweso unu iwe.+ 9 N’ihi na ọ bụrụ na unu alọghachikwute Jehova, ndị dọọrọ ụmụnne unu na ụmụ unu n’agha ga-emere ha ebere.+ Ha ga-ahapụkwa ha ka ha lọta n’ala a,+ n’ihi na Jehova bụ́ Chineke unu nwere ọmịiko,* na-emekwa ebere.+ Ọ gaghịkwa agbakụta unu azụ ma unu lọghachikwute ya.”+ 10 Ndị ahụ na-ejere eze ozi wee na-aga n’obodo n’obodo gazuo ebo Ifrem na ebo Manase.+ Ha garukwara ebo Zebulọn. Ma, ndị mmadụ nọ na-achị ha ọchị, na-akwakwa ha emo.+ 11 Ma, ndị ụfọdụ si ebo Asha, ebo Manase, na ebo Zebulọn wedara onwe ha ala bịa Jeruselem.+ 12 Ezi Chineke nọnyeere ndị Juda, nke mere ka ha jiri otu obi mee ihe Jehova si n’ọnụ eze na ndị isi gwa ndị Izrel. 13 N’ọnwa nke abụọ, imirikitiimi ndị mmadụ zukọrọ na Jeruselem ka ha mee Ememme Achịcha Na-ekoghị Eko.+ Ha hiri ezigbo nne.+ 14 Mgbe ha bịara, ha gara bupụ ebe ndị a na-anọ achụrụ chi ọzọ dị iche iche àjà na Jeruselem.+ Ha bupụkwara ebe ịchụàjà insens+ niile ma tụba ha na Ndagwurugwu Kidrọn. 15 E mechaa, ha egbuo anụ e ji eme Ememme Ngabiga n’abalị iri na anọ n’ọnwa nke abụọ. Ihere bịara ndị nchụàjà na ndị Livaị, ha edoo onwe ha nsọ ma webata àjà a na-esu ọkụ n’ụlọ Jehova. 16 Ha wee nọrọ ebe ha kwesịrị ịna-anọ otú Iwu Mosis onye nke ezi Chineke kwuru. Ndị Livaị ebunyezie ndị nchụàjà ọbara anụ ha ga-efesa n’elu ebe ịchụàjà.+ 17 E nwere ọtụtụ ndị n’ime ndị ahụ zukọtaranụ ndị na-edoghị onwe ha nsọ. Ndị Livaị nọkwa na-egburu ndị niile na-adịghị ọcha anụ ha wetara a ga-eji mee Ememme Ngabiga ahụ,+ iji doo ha nsọ n’ihu Jehova. 18 N’ihi na ọtụtụ ndị n’ime ìgwè mmadụ ahụ, karịchaa, ndị nke si Ifrem, Manase,+ Ịsaka, na Zebulọn, edebeghị onwe ha ọcha. Ha riri nri Ememme Ngabiga ahụ, n’agbanyeghị na iwu kwuru na ha ekwesịghị iri ya. Ma, Hezekaya kpeere ha ekpere, sị: “Ka Jehova, bụ́ onye ọma,+ gbaghara 19 onye ọ bụla nke doziri obi ya ịchọ ezi Chineke,+ bụ́ Jehova, Chineke nna nna ya hà, n’agbanyeghị na o debeghị onwe ya ọcha otú o kwesịrị ime maka ememme a dị nsọ.”+ 20 Jehova wee gee Hezekaya ntị ma gbaghara* ha. 21 Ndị Izrel ndị bịara Jeruselem wee jiri ezigbo ọṅụ mee Ememme Achịcha Na-ekoghị Eko+ ụbọchị asaa.+ Ndị Livaị na ndị nchụàjà nọkwa na-eto Jehova kwa ụbọchị. Ha nọ na-akụsi egwú ike, na-eto Jehova.+ 22 Hezekaya gbara ndị Livaị niile ume,* bụ́ ndị na-ejere Jehova ozi otú na-egosi na ha ma ihe. Ha mekwara ememme ahụ ụbọchị asaa,+ na-achụ àjà udo,+ na-ekelekwa Jehova bụ́ Chineke ndị nna nna ha. 23 Ndị niile ahụ zukọtara wee kpebie ime ememme ahụ ụbọchị asaa ọzọ. Ha jikwa ọṅụ mee ya ụbọchị asaa ọzọ.+ 24 Hezekaya eze Juda nyere ndị ahụ zukọtara otu puku (1,000) ehi na puku atụrụ asaa (7,000). Ndị isi nyekwara ha otu puku (1,000) ehi na puku atụrụ iri (10,000).+ Ọtụtụ ndị nchụàjà nọkwa na-edo onwe ha nsọ.+ 25 Ndị Juda niile zukọtaranụ, ndị nchụàjà, ndị Livaị, ndị niile si Izrel,+ na ndị mbịarambịa+ bi n’Izrel na ndị nke bi na Juda nọkwa na-aṅụrị ọṅụ. 26 A ṅụrịrị nnukwu ọṅụ na Jeruselem. Malite mgbe Solomọn nwa Devid eze Izrel nọ ndụ ruo oge ahụ, e nwetụbeghị ememme dị ka nke a na Jeruselem.+ 27 N’ikpeazụ, ndị nchụàjà, bụ́ ndị Livaị, biliri gọzie ìgwè mmadụ ahụ.+ Chineke nụkwara olu ha, ekpere ha rukwara eluigwe, bụ́ ebe dị nsọ o bi.
^ Na Hibru, “gwọọ.”
^ Na Hibru, “gwara ndị Livaị niile okwu ruru ha n’obi.”
2 Ihe E Mere 30